कसरी बनेको थियो टिकटकमा भाइरल २२ वर्ष पुरानो गीत 'पापी लर्के जोवन'? :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
कसरी बनेको थियो टिकटकमा भाइरल २२ वर्ष पुरानो गीत 'पापी लर्के जोवन'?
यो गीतका सर्जक-गायक शम्भुजित बाँस्कोटा र नृत्य निर्देशक कमल राईले यसरी सुनाए कथा
'नयाँ गीत आएछ भनेर युट्युबमा सर्च गरीगरी हेरेको त पुरानो गीत पो आउँछ त!🤔टिकटकले हिट भएछ जय होस् टिकटक😍😍!'
हालै 'घट्टजस्तै फनफनी' गीत टिकटक ट्रेन्डिङमा आयो।
टिकटक प्रयोगकर्ताका लागि गीतको स्थायीभन्दा 'पापी लर्के जोवनले कहिले हँसायो, कहिले रूवायो' अंश चिरपरिचित लाग्ला।
यही अंशमा बनाइएका क्लिप्स पछ्याउँदै सम्झना खड्का गीत युट्युबमा खोजिन्। उनले नयाँ सोचेर युट्युबमा खोजेको यो गीत दुई दशक पुरानो भन्ने थाहा पाउँदा उनी छक्कै परिन्। त्यसपछि नै सम्झनाले गीतको ओरिजिनल भिडिओमा दुई दिनअघि यसरी रमाइलो पारामा टिप्पणी गरेकी हुन्।
सम्झनाले जस्तै टिकटकमा धेरैले बितेका दुई-तीन सातामा युट्युबमा आएर कमेन्ट गरेको देखिन्छ।
उनीहरूमध्ये धेरैले लेखेका छन्- टिकटकमा हेरेर यहाँ (युट्युबमा) आएको। आजकै मितिमा पनि गीतमा कमेन्ट गरिरहेका छन्। टिकटकमा हिट भएपछि यो गीतको भ्युज पनि निरन्तर बढिरहेको छ। युट्युबमा यही गीतको कभर भर्सन र टिकटकका भिडिओसमेत भेटिन्छन्।
यो गीतमा नाचेर र अभिनय गरेर टिकटक बनाउनेको संख्या अहिले पनि बढ्दो छ। हालसम्म यो गीतमा दुई लाख बढीले टिकटक बनाइसकेका छन्।
घट्टजस्तै फनफनी नरेश पौडेलद्वारा निर्देशित 'हिरो' फिल्मको गीत हो। २२ वर्षअघि मुम्बईको स्टुडियोमा रेकर्ड भएको यो गीतमा शम्भुजित बाँस्कोटाको संगीत र शब्द छ। पुरुष स्वरमा पनि शम्भुजितकै छ भने महिला स्वर दीपा झाको।
फिल्ममा राजेश हमाल, गौरी मल्ल, कृष्ण मल्ल, निरुता सिंह, रेखा थापालगायत मुख्य भूमिकामा छन्। हिरो रेखा थापाको पहिलो फिल्म पनि हो। घट्टजस्तै फनफनी गीतमा सुजिता घिमिरे, नवीन श्रेष्ठ, गौरी मल्ल, कृष्ण मल्ललगायत कलाकार देखिएका छन्।
नयाँ होस् वा पुरानो जुनसुकै गीतलाई चर्चामा ल्याइदिन सक्नु टिकटकको विशेषता हो। पछिल्लो समय यो नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा गीत-संगीत प्रचार गर्ने प्रभावकारी थलो बनिसकेको छ।
खेम सेन्चुरी र मधु क्षेत्रीको 'सोचे झैं जिन्दगी रैनछ', राजनराज सिवाकोटीको 'फूलबुट्टे सारी', घायल फिल्मको 'माया गर मायालुले' टिकटककै कारण चलेका केही गीत हुन्।
शम्भुजित बाँस्कोटा। तस्बिर सौजन्यः शम्भुजित बाँस्कोटाको सामाजिक सञ्जाल
घट्टजस्तै फनफनी यसको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। टिकटकमा गीतको पापी लर्के जोवनवाला अंश धेरैले मन पराएर क्लिप्स बनाएका हुन्।
हामीले यो गीतका सर्जक तथा गायक शम्भुजित बाँस्कोटालाई सोध्यौं, 'यो गीत २२ वर्षपछि किन ट्रेन्डिङमा आएको होला?'
उनले भने, 'टिकटकमा बिस्तारै पहिलेका राम्रा गीत नयाँ पुस्ताले खोजी-खोजी सुन्न थालेको देखिन्छ। यो गीतको हकमा पनि त्यस्तै भएजस्तो लाग्छ।'
संख्यात्मक र गुणात्मक दुबै हिसाबले शम्भुजित आधुनिक तथा सिनेमा संगीतका सर्वाधिक सफल संगीतकारमध्ये एक हुन्। दुई दशक नेपाली सिनेमामा सक्रिय उनका अनुसार उनले तीन सय ६७ फिल्ममा संगीत दिएका छन्।
दर्जनौं हिट गीतका संगीतकारसँगै उनी गायक र रचनाकार पनि हुन्। यसमध्ये 'चट्ट रूमाल क्या मालुम', 'अच्छा लेकिन लन्डनको चिसोले समाउला', 'सुन सुन सानम मलाया छाउनी', 'म हुँ नेपाली बाबु', 'ए संगीता', 'हाम्लाई पनि मायाले हेर पार्वती' जस्ता थुप्रै गीत पर्छन्।
जनमानसमा भिजेका बोलिचालीका शब्द टपक्कै टिपेर गीत बनाउने खुबी भएका उनका गीत आज पनि धेरैको रोजाइमा पर्छ। संगीतकार शम्भुजितले 'पापी लर्के जोवन' भने महाराजगञ्जको घरको बैठक कोठामा कम्पोज गरेका थिए।
शम्भुजितका अनुसार निर्माताहरू फिल्मभित्रका मेलोडियस गीत अन्य गायकगायिकाले गाए पनि लोकलय वा पपशैलीमा उनकै स्वर भएको कम्तीमा एउटा गीत होस् भन्ने चाहन्थे।
'गीतमा नयाँपन र फरक स्वाद होस् भन्ने प्राथमिकताका साथ काम गर्थेँ। हामीजस्तो बोल्छौं त्यस्तै शब्द टिपेर, त्यसैलाई गीतमा सिँगारेर फिल्मको कथावस्तुसँग मेलखाने गरी गीत बनाउँथेँ,’ उनले भने, 'घट्टजस्तै फनफनीमा पनि त्यस्तै शब्द प्रयोग गरिएको थियो।'
शम्भुजित 'भर्साटाइल' संगीतकार भएकाले हरेक फिल्मभित्र अलग स्वाद-शैलीका गीत बनाउने क्रममा लोक वा पपशैलीका गीत पनि बनाउँथे। घट्टजस्तै फनफनीका शब्दमा पनि उनले भनेजस्तै विशेषता भेटिन्छ।
धेरैलाई गीतको नृत्य र संगीतले आकर्षित गरेको देखिन्छ। तामाङ सेलो बिटमा आधुनिक शैली मिसाइएको यसको संगीतमा आधुनिक रिदम प्रोग्रामिङ गरिएको शम्भुजित बताउँछन्।
'रिदमको प्रोग्रामिङ र एकस्टिक प्लानिङ छुट्छुट्टै किसिमले गरिएको थियो। मुम्बईमा नयाँनयाँ प्रोग्रामिङ गर्ने प्रविधि भित्रिएको समय थियो। त्यो बेला यो गीतमा प्रयोग भएको प्रोग्रामिङ नयाँ नै थियो।'
टिकटकमा धेरैले एउटै शैलीमा नाच्दै भिडिओ क्लिप्स बनाएको यो गीतका नृत्य निर्देशक कमल राई हुन्। हामीले उनीसँग पनि यो गीत चर्चित हुने कारणबारे सोध्यौं।
कमल राई। तस्बिर सौजन्यः कमल राईको फेसबुक
'टिकटकमा अचेल पुराना गीत पनि हिट हुन थालेछन्। यसरी त्यस बेलाका गीतको चर्चा हुँदा हामी पुराना मान्छका दिन फर्किएजस्तो लाग्दोरहेछ,' उनले हाँस्दै भने।
उनले टिकटकमा यो गीत हिट भएपछि यही गीतमा काम गर्ने कलाकारबाट थाहा पाएको बताए।
'त्यस बेला हामी मिलेर सामूहिक रूपमा काम गर्थ्यौं,' उनले भने, 'दर्शकले हामीले गरेको मेहनतलाई अझै माया गरिराख्नुभएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ।'
उनले यो गीत फेरि चर्चामा आएको सन्दर्भमा आफ्ना सहायक गोविन्द प्रभातलाई पनि सम्झिए। नृत्य निर्देशक कमलले झन्डै चार दशकअघि 'कान्छी' बाट नेपाली सिनेमामा सहायक नृत्य निर्देशकका रूपमा करिअर सुरू गरेका हुन्।
'झुमा' फिल्मको 'बोल बोल' गीतको कामबाट स्थापित भएका नृत्य निर्देशक कमलले करिब तीन सय फिल्ममा काम गरेका छन्। नृत्य निर्देशक कमलका अनुसार संगीतकार र निर्देशकसँग सल्लाह गरेर कोरियोग्राफी गर्थे। घट्टजस्तै फनफनीमा पनि उनले निर्देशक र संगीतकारको सोचलाई मूर्त रूप दिने प्रयास गरेका थिए।
उनका अनुसार यो गीतको छायांकन बालाजूमा भएको हो। एक रातमा छायांकन सकिएको गीतको निर्देशन अवधारणा 'अन द स्पट' गरिएको उनको भनाइ छ। कुराकानी क्रममा उनले नाच्ने कलाकार सुजिता घिमिरेको विशेष प्रशंसासमेत गरे।
नृत्य निर्देशक कमलका अनुसार गीतमा सुरूमा रेखा थापा र नवीन श्रेष्ठले नाच्ने तयारी गरिएको थियो, 'तर पछि कथामा हेरफेर भएपछि सुजिता घिमिरे र नवीन श्रेष्ठले नृत्य गर्नुभयो।'
संगीतकार शम्भुजित र कमलको जोडीले केही फिल्ममा काम गरेका छन्। हिरो फिल्मकै पनि 'चक्कु छुरी' गीत चर्चित भएको थियो।
घट्टजस्तै फनफनीको चर्चाले शम्भुजित र कमल दुबैलाई घुमाउँदै-घुमाउँदै अहिले आफ्नो सहकार्यको त्यो पुरानो समयमा फर्काइदिएको छ। शम्भुजित कमललाई 'भर्साटाइल' नृत्य निर्देशक मान्छन्। 'रातो टीका निधारमा', 'सुन सुन सनम मलाया छाउनी' लगायत थुप्रै चर्चित गीतमा यी दुईले सहकार्य गरेका छन्।
हिरो फिल्म युट्युबमा हाइटेक इन्टरटेन्मेन्ट च्यानलबाट गत वर्षको जुलाइमा अपलोड भएको देखिन्छ। हालसम्म २९ लाख बढी भ्युज भएको फिल्म युट्युबमा आएपछि यसका गीत नयाँ पुस्ताका दर्शकसम्म पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
टिकटकका सक्रिय प्रयोगकर्ताले नाचेर गाउन मिल्ने गीतलाई विशेष रूचाएको पाइन्छ। घट्टजस्तै फनफनी/पापी लर्के जोवनमा पनि धेरैले नाचेर भिडिओ क्लिप्स बनाएका छन्।
यसरी टिकटकमा गीत चल्दा कमल निःशर्त खुसी भइरहेका छन् भने शम्भुजीत सशर्त हर्षित छन्।
'आफ्ना सिर्जना नयाँ पुस्ताले पनि मन पराउँदा खुसी लाग्छ। तर टिकटकमा गीत चल्दा मलाई गर्व महसुस हुँदैन,' शम्भुजित भन्छन्, 'अहिले सामाजिक सञ्जालमा उत्ताउला र द्विअर्थी गीतको बिगबिगी छ। त्यसमा फिल्टर गर्न सकेर राम्रा सिर्जनाले ठाउँ पाए मात्र म पूरा खुसी हुनेछु।'
यो गीतको चर्चाले हिरो फिल्म र यस गीतमा संलग्न सबै खुसी हुने नै भए। तीमध्ये गीतमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी सुजिता घिमिरे एक हुन्।
उनले आफ्नो टिकटक ह्यान्डलमा यही गीतमा सहकलाकारसँग आफू नाचेको क्लिप राख्दै लेखेकी छन्, '२२ वर्षअगाडि गरेको फिल्मको गीत अहिले टिकटकमा भाइरल हुँदा साह्रै नै खुसी लाग्यो। सबै जनालाई धेरै धन्यवाद।'
@sujitaghimire1 Aafule 22 barsa agadi gareko movie song Ahile TikTok Ma viral huda sarai nai khushi lagyo❤️❤️❤️Thank u everyone ❤️❤️❤️😘😘😘#sujitaghimire😊 ♬ original sound - NAREN OLI
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ६, २०७८, १८:०७:००